Banijya News | » यो वर्षको भ्यालेन्टाइन डे कुन राशिको लागि कस्तो ? यो वर्षको भ्यालेन्टाइन डे कुन राशिको लागि कस्तो ? – Banijya News
यो वर्षको भ्यालेन्टाइन डे कुन राशिको लागि कस्तो ?
हरेक फ्रेबुअरी १४ मा मनाइन्छ, भ्यालेन्टाइन डे। फागुन २ गते यानिकी फेब्रुअरी १४ तारिखमा हरेक व्यक्तिले आफ्नो प्रेमी वा प्रेमिका मिलोस् भन्ने चाहना राख्ने गर्छन् । यो दिन आफूलाई मन परेका मान्छेलाई कार्ड, फूल, चकलेट तथा अन्य सामग्री दिएर प्रेम दर्शाइन्छ। संसारभरि आफ्नो प्रेमी, प्रेमिकालाई विभिन्न उपहार दिएर प्रेम देखाइन्छ। यति तपाईँहरु पनि यस्तै चाहना राख्दै हुनुहुन्छ भने आफ्नो राशिअनुसार प्रेम अभिव्यक्त गर्न सक्नुहुन्छ । यस वर्षको प्रणय दिवस कुन राशिका लागि कस्तो रहनेछ ? कुन राशिका मानिसहरुको स्वभाव कस्तो हुन्छ ? भन्ने विषयमा आज हामी जानकारी गराउदैछौँ ।
मेष राशिः ज्योतिषशास्त्रका अनुसार मेष राशिका मानिसहरु आफ्नो प्रेमको बारेमा मन खोलेर कुरा गर्ने गर्छन् । मेष राशिका व्यक्तिहरूले प्रेम प्रस्ताव राख्दा बिहानको समय रोज्नु उपयुक्त हुन्छ। मेष राशिका लागि आकर्षणको पहिलो केन्द्र सिंह राशिसँग हुन्छ भने लामो समयका लागि भने मेष राशिको जोडी मकर र कुम्भ राशिसँग सकारात्मक हुन्छ।
वृष राशिः ज्योतिषशास्त्रका अनुसार वृष राशिका मानिसहरु सुन्दरता भन्दा मानवीय गुणतर्फ बढी ध्यान दिन्छन् । यो राशिका लागि प्रेम गर्न सबैभन्दा उपयुक्त राशि कन्या हो। वृष राशिका व्यक्तिहरूले मिथुन, वृश्चिक तथा मकर राशिका व्यक्तिसँग पनि प्रेमसम्बन्ध अघि बढाउन सक्छन्। यो राशिका व्यक्तिहरूको बोलीको प्रभाव कम हुने भएकाले प्रत्यक्ष भेट्नुभन्दा विद्युतीय सञ्चारमाध्यममार्फत प्रपोज गर्नु बढी प्रभावकारी हुन्छ।
मिथुन राशिः यो राशिका मानिसहरु शान्त स्वभावका हुन्छन् । यी राशिका मानिसहरु आफ्नो हरेक काममा नयाँपन खोज्छन् । यो राशिका व्यक्तिहरूको प्रेम धनु, वृष र मिन राशिसँग राम्रो हुने देखिन्छ। यद्यपि तुला राशिसँगको सम्बन्ध प्रगाढ हुने देखिन्छ । यो राशिका व्यक्तिले हरियो वा नीलो रङ्गका वस्त्रको प्रयोग गरी उत्तर फर्किएर सार्वजनिक रूपमा उद्घघोष गर्दै प्रस्ताव राख्नुपर्छ। यो शैलीको प्रस्ताव उनीहरूको भ्यालेन्टाइनले रु चाउने देखिन्छ।
कर्कट राशिः कर्कट राशिका मानिसहरु भावुक स्वभावका हुन्छन् । कर्कट राशिका लागि वृश्चिक राशि भएका व्यक्ति सर्वोत्तम मानिन्छ । त्यसबाहेक मेष र कुम्भ राशि भएका व्यक्तिहरूसँग पनि प्रेम गर्दा फरक पर्दैन। यो राशिका मानिसहरुलाई पुरानो यादहरु समेटिएको केहि उपहार दिदाँ एकदमै खुशी हुन्छन् । यो राशिका व्यक्तिले सेतो, खैरो अथा नीलो रङ्गको वस्त्र लगाएर पूर्व दिशातर्फ फर्कंदै दुई अर्थ लाग्ने शब्द प्रयोग गरी प्रपोज गरे सकारात्मक उत्तर आउनेछ।
सिंह राशिः यो राशिका मानिसहरुले आफ्ना अगाडी अरु कसैले भनेका कुरा पनि सुन्दैनन् । यो राशि भएका व्यक्तिका लागि मेष राशिसँगको प्रेम सर्वोत्तम हुन्छ। यद्यपि सिंह राशिका व्यक्तिको प्रेम सिंह राशिकै व्यक्तिसँग पनि सफल हुने देखिन्छ। प्रेम प्रस्ताव इमेल वा कुनै पनि इलेक्ट्रोनिक्स डिभाइसको सहायताले गर्नु फलदायी हुन्छ। यद्यपि इमेल वा सन्देश पठाउन भने १२ देखि ३ बजेबीचको समय नै छान्नुपर्छ।
कन्या राशिः यो राशिका मानिस कोमल हुन्छन । तपाईँ यिनीहरुलाई एउटा ग्रीटिङ कार्ड दिएर पनि प्रेमप्रस्ताव राख्न सक्नुहुन्छ । कन्या राशिको संगत तुला, धनु तथा मिन राशिसँग हुँदा पनि प्रेमले सफलता पाउँछ। यो राशि भएका व्यक्तिले पे्रमप्रस्ताव राख्दा मध्याह्न ३ देखि साँझ ६ बजेको समय रोज्नु उपयुक्त हुन्छ।
तुला राशिः यो राशिका लागि सर्वाधिक प्रिय राशि मिथुन हो। मेष र मकरसँगको प्रेमसम्बन्ध पनि सकारात्मक रहन्छ। यो राशि माथि मंगल ग्रहको प्रभाव रहने हुँदा डेटिङ जाँदा खुला जमिनमा बसेर दुःख सुख साटे आगामी जीवन सुखमय रहनेछ। यो राशिका व्यक्तिले माया व्यक्त गर्दा न्यानो अगालोमा बाँध्नु उपयुक्त हुन्छ।
वृश्चिक राशिः यो राशिका लागि कर्कट राशि उपयुक्त मानिन्छ। यसबाहेक सिंह र कन्या राशि भएका व्यक्तिसँग पनि वृश्चिक राशिको सम्बन्ध गाढा हुन सक्छ। यो राशि भएका मािनसहरुले कसैलाई प्रपोज गर्नुअघि सम्हालिनु जरुरी छ । प्रेम प्रस्ताव राख्ने समयका हकमा सूर्यास्त बढी प्रभावकारी हुन्छ। उपहारमा मनोरञ्जनका सामग्रीहरू दिनु राम्रो हुन्छ।
धनु राशिः यो राशि आज्ञाकारी भएकाले कुम्भ राशिसँगको प्रेमसम्बन्ध निकै राम्रो हुन्छ। त्यसबाहेक मेष र सिंह राशि भएका व्यक्तिसँग अफेयर चलाउँदा पनि सकारात्मक परिणाम आउँछ। यो राशिका मानिसहरुले प्रणय दिवसमा आफ्नो साथीलाई डिनर डेटमा लगेर प्रेमप्रस्ताव राख्नु उत्तम छ । यस पटकको भ्यालेन्टाइन्स डे बिहिबार परेकाले यो राशिमा बृहस्पति ग्रहको प्रभाव पर्छ। फलस्वरूप यो दिन धनु राशिका व्यक्तिले जुनसुकै राशिका व्यक्तिसमक्ष प्रेम प्रस्ताव राख्दा त्यसको प्रभाव अन्य दिनको तुलनामा बढी हुन्छ।
मकर राशिः यो राशिका व्यक्तिका लागि मेष राशिका व्यक्ति सर्वोत्तम मानिन्छन्। त्यसबाहेक कन्या र कर्कट राशिसँगको सम्बन्धले पनि फरक पर्दैन। यो राशिमाथि शनि ग्रहको राम्रो प्रभाव भएकाले गिफ्टका रूपमा इलेक्ट्रोनिक्स चीजहरू प्रयोग गर्दा बल आफ्नो पोल्टामा पर्न सक्छ।
कुम्भ राशिः यो राशिका मानिससँग भित्री मनको कुरा बाहिर ल्याउनु त्यति सहज छैन । अल्छी स्वाभाव भएको राशिका रूपमा चिनिने कुम्भ राशिले तुला राशिका व्यक्तिसँग प्रेमसम्बन्ध गाँस्नु उत्तम हुन्छ साथै, वृष र कर्कट राशि पनि कुम्भका लागि उपयुक्त हुन्छन्। फागुन महिना कुम्भ राशिका लागि उत्कृष्ट हुने भएकाले भ्यालेन्टाइन डेमा प्रपोज गरे खेर जाँदैन।
मीन राशिः सोझो राशिका रूपमा चिनिने मीन राशिका मानिसहरु एकदमै भावनात्मक हुन्छन् । मीनको तुलासँग राम्रो सम्बन्ध हुन्छ । त्यसबाहेक मिथुन र कन्यासँगको सम्बन्ध पनि उपयुक्त हुन्छ। डेटिङ स्पटका लागि मन्दिर वरिपरिका क्षेत्र जहाँ धारा वा पानीका स्रोतहरू हुन्छन् त्यहाँ गएर प्रपोज गरे उत्तम हुन्छ । गिफ्टका रूपमा देवी, देवताका मूर्ति तथा सुन र तामाले बनेका औंठीहरू दिए दुई धड्कनको सम्बन्धले गति लिनेछ।